तुरुन्तै लकडाउन गर नत्र केही हप्ताभित्र मै भयावह हुनसक्छः डा. सुन्दरमणि दीक्षित – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Lockdown News/तुरुन्तै लकडाउन गर नत्र केही हप्ताभित्र मै भयावह हुनसक्छः डा. सुन्दरमणि दीक्षित
काठमाडौं । नेपालका वरिष्ठ चिकित्सकहरुले तत्काल लकडाउन नगरे फेरी कोरोनाले भयावह अवस्था ल्याउने चेतावनी दिएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा चिकित्सकहरुले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । उनीहरुले सरकारले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकेका कारण अहिले कोरोना फैलिएको तर्क गरेका छन् । यस्तै अवस्था रहे अबको एक सातामा कोरोना रोक्नै नसक्ने गरी फैलन पनि चेतावनी दिएका छन् ।
वरिष्ठ चिकित्सक डा। सुन्दरमणि दीक्षितले अहिलेसम्म कोभिड–१९ रोगको रुपमा नदेखिएको तर समुदायस्तरमा फैलिँदै गए रोगको रुपमा देखापर्न सक्ने तर्फ सचेत गराएका छन् । उनले सरकारले प्रभावकारी ढंगले काम नगरेका कारण अहिलेको अवस्था आएको भन्दै गुनासो ब्यक्त गरेका छन् । अझै पनि सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन यस्तै अवस्था रहे केही दिनमै संक्रमण रोगका रुपमा फैलन्छ । त्यो अवस्था भयावह हुन्छ उनले भने ।
इपिमिडियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वप्रमुख एवं सरुवारोग विशेषज्ञ डा। बाबुराम मरासिनीले कोरोनाको प्रभाव देखिएको क्षेत्रबाट नदेखिएको क्षेत्रमा आवतजावतमा कडाइ गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । अहिलेक ाठमाडौं कोरोनाका कारण मुख्य जोखिम क्षेत्र भएको पनि उनको भनाई छ । उनले काठमाडौंमा परिक्षणको दायरा बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालका सरुवारोग विशेषज्ञ डा। अनुप बास्तोलाले मानिसहरुको आवागमनलाई तत्काल व्यवस्थित नबनाउने हो भने अवस्था नियन्त्रण वाहिर जाने बताएका छन् । अबको केही सातामै अवस्था भयावह हुने उनको तर्क छ ।
त्यस्तै, डा। प्रकाशराज रेग्मीले सामाजिक सन्जाल ट्वीटरमा पोष्ट गर्दै भनेका छन्, ‘कोरोना आक्रामक भएको छ। धेरै लक्षणात्मक घटनाहरू बढसरहेका छन, मृत्युदर वृद्धि भइरहेको छ, त्यसैले कम्तिमा १४ दिनको लागि तुरुन्त लक लकडाउन आवश्यक छ ।’
रुपा र कृष्णको जिवनमा आयो यस्तो नयाँ खुसी, गर्भवती अवस्थाको तस्बिर सार्व जनिक गर्दै रुपा ले लेखिन् यस्तो भावुक स्टाटस !!
नायिका गौरी मल्लको प्रधानमन्त्री लाई खुला पत्र, सिंहदरबार र बालुवाटार भन्दा बाहिर पनि नेपाल छ यो कुरा नबिर्सनु होला